Blog Reader: [ကဗျာချစ်သူ (Poem Lover)] 25 New Entries: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု
[ကဗျာချစ်သူ (Poem Lover)] 25 New Entries: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု
ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုပြည့်စုံအောင် သင်ကြားပေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့သူ....
အမြဲ ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးရင်း အကြင်နာနဲ့ နွေးထွေးစေသူ...
တစ်နှစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ခဏလေးပါနော်။
ဒီနေ့ကစပြီး ဟိုးးးး မသိနိုင်တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ အထိ အတူ ရှိနေခွင့် ရချင်တယ်။
ဒီ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပုံဖော်ကြည့်ချင်တယ်။
ခဏလေး လို့ မဆိုသာ
ကျော်ဖြတ်ခဲ့ အတူတူ အဆိုးနဲ့အကောင်း.....
တစ်ခါတစ်တော့လဲ လွမ်းရတဲ့ ရင်ခွင်အစုံက နုံးချိချိပေါ့
ယုယမှုနဲ့ မင်းအချစ်ကို ငါတိမ်းမူးနေလို့.....
ငါ ကိုယ်တိုင်က နာကျင်ရစမြဲပါ။
ဒီနှစ်သစ်မှာ ကဗျာတွေလဲ မရေးဖြစ်ဘူး။ ဟိုရက်က ကိုရင်ညိန်းနဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တော့ ကျွန်မကို အမေများနေ့အတွက် ကဗျာတွေ စုပြီး ထုတ်မယ်ပြောလို့။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်။ ဘလော့ဂါ အစ်ကို၊ အစ်မတွေရဲ့ လက်ရာနဲ့ အမေများနေ့ကဗျာလေးကို အားလုံးနဲ့ အတူ ခံစားခွင့်ရချင်လို့ ကျွန်မဘလော့လေးမှာ လင့်လေးကို ပေးလိုက်တယ်နော်။ သွားကြည့်ပြီး ခံစားပေးကြပါဦး။
Publish at Scribd or explore others: PoetryLiterature
တန်ဖိုးတစ်ခုဆိုတာ သတ်မှတ်တဲ့လူပေါ်မှာတည်တယ်။ ဘ၀ဆိုတာကို တန်ဖိုးတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပေးဝယ်ရမယ့် အရင်းအနှီးကတော့ အချစ်၊ အချိန်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါကလဲ ခေးရော့စ်ရဲ့အတွေးပါ။ ဖောဝေါ့မေး တစ်ခုကနေရတာလေးကို ဘာသာပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဒီနေ့ တကယ်လို့များ နားမ၀င်သာတဲ့ စကားတစ်ခုကို ပြောမိတော့မယ်ဆိုရင် စကားလုံးဝမပြောတတ်တဲ့သူတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
အရင်တုန်းက အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချေးများတယ် ဆိုရင် စားစရာတောင် လုံးဝမရှိနေတဲ့ သူတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ကြင်ယာဘက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကောင်းမြင်နေမယ်၊ အပြစ်တွေတင်နေမယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာအဖော်တစ်ယောက် တစ်လေမှ မရှိနိုင်လို့ ဘုရားသခင်ထံ ငိုကြွေးပြီး ဆုတောင်းနေသူများကို သတိရလိုက်ပါ။
ဒီနေ့မှာ တကယ်လို့များ ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ်တင်နေမယ်ဆိုရင် တစ်ချို့သောလူများ ဘ၀ဆိုတာကို သေချာမသိခင်ဘဲ လူ့လောကကနေ ထွက်ခွာသွားနေရတယ်ဆိုတာကို သတိရလိုက်ပါ။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗာဟီရများတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ပြောနေမိတယ်ဆိုရင် တစ်ချို့လူတွေ ကလေးလိုချင်လို့မှ ကလေးမရနိုင်တာကို သတိရလိုက်ပါ။
တစ်ချိန်က ကိုယ့်အိမ်မှာ ဖုန်တင်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က မလှည်းမကျင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်တွေ မြင်နေမိတယ်ဆိုရင် တစ်ချို့သောလူတွေ အပြစ်တင်ခွင့်ဘာမှမရှိဘဲ လမ်းပေါ်မှာနေထိုင်နေရတာကို သတိရလိုက်ပါ။
ကိုယ်က ယာဉ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေရက်နဲ့ သွားရတဲ့ ခရီးဝေးလို့ ငြီးတွားနေမယ်ဆိုရင် ခရီးချင်းအတူတူကိုမှ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် အားကိုးပြီး လမ်းလျှောက်နေရတဲ့ သူတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွစိပွစိနဲ့ အပြစ်မြင်နေမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပင်ပန်းနေမယ်လို့ မြင်နေရင် အလုပ်လက်မဲ့လူတွေ၊ မသန်မစွမ်းတွေနဲ့ အလုပ်လိုချင်တဲ့လူတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
တွေ့ရာလူကို လက်ညှိုးလေးထိုးပြီး အပြစ်မြင်နေမယ့်အစား လောကကြီးမှာရှိတဲ့ ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ပြည့်စုံခြင်း ဆိုတာကို မပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ဘူးဆိုတာကို သတိရလိုက်ပါ။
ဒါက ဖောဝေါ့မေးထဲက စာသားလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ရေးထားတာကတော့ ဟုတ်လို့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အကောင်းမြင်ကြည့်မယ်ပေါ့။ အဓိက လူတစ်ယောက်မှာ သူရဲ့ ပြသနာကို ဘယ်ရှုထောင့် ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာ အရေးအကြီးဆိုပါ။ အရာရာကို အကောင်းမြင်ပြီး အရှုံပေး နှလုံးအေး အားလုံးကို လက်မြောက် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လက်ခံမယ်ဆိုလဲ မဟုတ်သေးပြန်ဘူး။ အချိန်အခါနဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ခွဲခြားသိလို့ တန်ဖိုးဆိုတာကို နားလည်မယ်ဆိုရင်…………….
တစ်ခါတုန်းက အရာခပ်သိမ်းအကြွင်းမဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရတဲ့ စစ်သားလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူဟာ သန်မာတယ်၊ ရဲရင့်တယ်၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလို လူသားတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်လဲ သူ့မှာတာဝန်သိစိတ် အပြည့်ရှိတယ်။
တစ်နေ့မှာ ခေါင်းဆောင်က " တကယ်လို့များ မင်းတစ်ခြားလူသားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်ရင် ဒါမှမဟုတ် လူတွေကို အနာတရဖြစ်အောင်သာ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ဆုတံဆိပ်တွေ အမြောက်အများ ချီးမြှင့်ခံရမှာဖြစ်သလို အဆုံးမဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှု တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရစေမယ်။ ဒီလိုအမိန့်ပေး ခိုင်းစေတာလဲ တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါ။" လို့ပြောလိုက်တယ်။
" ကျွန်ုပ်က ကရုဏာ ရှေ့ရှုတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ" စစ်သားလေးကဆက်ပြောတယ် " သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူတွေကို နာကျင်အောင်လုပ်တာက တကယ်ပဲ ကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်ယူလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား?"
ဒါနဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဖြေတယ် "ယုတ်ညံ့တဲ့၊ စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့ လူတွေကို သုတ်သင်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက သူတို့ကို အဆုံးစီရင်လိုက်ဖို့ပဲ။ သူတို့ အနာတရဖြစ်မှ ငါတို့စစ်တပ်ရဲ့ အင်အားကြီးမားမှု၊ တန်ခိုးအာဏာရှိမှုတွေပို ထင်ရှားသိသာလာပြီး သူတို့တွေ ငါတို့ကိုကြောက်ရွံ့မယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီလို သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုဟာ ငြိမ်ချမ်းမှုကို ဆောင်ယူလာဖို့အတွက် လိုအပ်တယ်"
" အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ပြီး အကြမ်းဖက် အပြုအမူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ယူလာမယ်…ဟုတ်လား? ကျွန်တော် မေးချင်တယ်ဗျာ။ ဒီအပြုအမူ လုပ်ရပ်တွေက ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အမုန်းတရား၊ ကြောက်ရွံ့မှု နဲ့ လက်စားချေခြင်းဆိုတဲ့ သစ်စေ့တွေကို စိုက်ပျိုးလိုက်သလိုပဲ။ ဘာသာဝင်အမျိုးမျိုးရဲ့ တရားဟောသဘောတွေကို မလေးမစားပြုမူလိုက်သလိုပါပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ"
ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဘာမှပြန်မဖြေပဲ တုံဏှိဘာဝေနဲ့လုပ်နေတယ်။ နောက်တော့ အသံနက်ကြီးနဲ့ " အေး…မင်းဒါတွေကို မလုပ်ချင်ရင်ရတယ်။ တကယ်ပဲ ငြိမ်ချမ်းမှုလိုလားတဲ့ တစ်ခြားလူတွေကို ငါခိုင်းလိုက်ရုံပဲလေ..ငါထင်ပါတယ် သူတို့တွေ အသက်စွန့်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ပဲလို့"
စစ်သားလေးက ပြန်ပြောတယ် " စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ နည်းတွေ အများကြီးရှိတာပါပဲ။ လူတွေကျွန်တော့ကို ထင်မြင်ယူဆ သတ်မှတ်ထားတာက ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံတယ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါတွေကလဲ အရေးကိစ္စကြုံလာတိုင်း ကျွန်တော့ သေနတ်ကို ဘေးမှာချလို့ မတရားခံရသူတွေကို တရားနည်းလမ်းကျအောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးရည်နဲ့ လူတွေကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပါ။ အမုန်းတရားတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ………….. လျစ်လျူရှုခြင်းတရားကို အသိဥာဏ်ပညာနဲ့ …….. ကြောက်ရွံ့မှု ကို သစ္စာတရား နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချမှု တွေနဲ့ အနိုင်တိုက်မယ်။ လိုအပ်လို့ သေနတ်ကိုစွဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရင်တောင် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖန်ဆင်းမှုအပေါင်းပေါ်မှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မိလေခြင်းဆိုတဲ့ ပူဆွေးမှုနဲ့ ယူကျုံးမရဖြစ်မိတယ်ဗျာ"
"မင်းကွာ……အဲ့ဒါ မင်းရန်သူတွေလေ" ဆိုပီး ဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးက အော်ဟစ်နေပါတော့တယ်။ စစ်သားလေးကလဲ " မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေက ကျွန်တော့ အတွက် တစ်အူတုံဆင်း ညီရင်းအစ်ကိုတွေလိုပါပဲဗျာ။ အားနည်းတဲ့လူ၊ ပြောခွင့်မရပဲ ဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတစချို့ နဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် …ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ…….လူသားအားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တာပါ… အံ့သြစရာကောင်းတာ တစ်ခုရှိတယ်… ဘုရားသခင်က သွေးထွက်သံယိုမှုမပါပဲ အောင်နိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ချို့ ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်။ ပညာမဲ့ လူတန်းစားတွေအတွက် ကျွန်တော် ကျောင်းဆောင်ပြီးကူညီမယ်။ နာဖျားမကျန်းဖြစ်သူတွေကို ဆေးရုံတွေဆောက်ပေးမယ်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသူတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ လယ်ယာတွေတည်ထောင်ပေးမယ်။ လက်စားချေလိုမှုဆိုတဲ့ အကြီးမားဆုံး ရန်သူကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်နားလည်လို့ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ လက်နက်နဲ့ တိုက်ထုတ်မယ်ဗျာ။"
ခေါင်းဆောင်ကလဲ " ဟ..ဟ…လုပ်လေ သူတို့က မင်းကိုတောင် ပြန်သတ်သွားဦးမယ်" လို့ပြောပြန်ရော။
ဒါနဲ့ စစ်သားလေးက " ဟုတ်ရင်လဲဟုတ်မယ်လေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့မိသားစု သူတို့သွေးသားတွေကိုသာ ကျွန်တော် မထိခိုက် အမှားမကျူးလွန်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့မိသားစုကို သူတို့ဘာလို့ အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ထည့်မှာလဲ?"
" မင်းက အတွေးသမားသက်သက်ပဲကွ….. ဒါပေမယ့်ကွာ မင်းလုပ်ရပ်တွေက တကယ်တမ်းတော့ ဖြစ်နိုင်ချေကို မရှိဘူး" လို့ခေါင်းဆောင်က ပြောတယ်။
စစ်သားလေးက " ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒက ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာကို ခေါင်းဆောင်ကြီး လက်ခံပါသလား?" လို့လဲမေးရာ ခေါင်းဆောင်က " လက်ခံတယ်လေ" လို့ပြန်ပြောတယ်။စစ်သားလေးက " ဒါဆို ဘုရားသခင်ရဲ့ ဆန္ဒတွေကရော ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးလို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဆိုလိုပါသလား? ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေ ပေးတယ်။ သူ့ရဲ့ သင်ကြားမှုအောက်မှာ ချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ လူအများကို စိတ်အာဟာရဖြည့်ပေးရမှာ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်တွေပါ။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုပြုမူဆက်ဆံလဲဆိုတာ ကိုယ်က သူ့ကိုဘယ်လိုအရင် ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျပ်တည်းဆင်းရဲမှု၊ လျစ်လျူရှုခံထားရခြင်းနဲ့ ဖိနှိပ်မှု၊ အကြောက်တရား အစရှိတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်စစီကြဲပြန့်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ဘ၀တွေကို စုစည်းပေးလိုက်နိုင်သလိုပါပဲ။ ဒါဆိုရင် သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို အန္ဒရာယ်ပြုလိုတဲ့ ဆန္ဒတွေဆိုတာ ဘယ်မှာလာရှိတော့မလဲ။ ဥပမာဗျာ…အရုိးရှင်းဆုံးတစ်ခု ပြောရရင် သူတို့အတွက် လိုအပ်မယ့် အလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပါစို့။ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်နဲ့ တကယ်သာကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး သူတို့ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်မယ်။ သူတို့အတွက် ဖန်တီးပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို သူတို့က တကယ်အကျိုးရှိရှိအသုံးချမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လဲ အကျိုးရှိနိုင်တာပေါ့။"
ခေါင်းဆောင်ကြီးကလဲ ဟိန်းဟောက်တဲ့ လေသံနဲ့ " ဒီလိုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ကုန်ကျမယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလားကွ" လို့လဲပြောရော စစ်သားလေးက " ဒါဟာကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် ပေးဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးပဲလေ။ လောကမှာ ဘယ်အရာကိုမှ အလကားမရပါဘူး။ တကယ်လို့ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လှဲလှယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ လူသားအားလုံး လူနေမှုဘ၀သာယာဖို့ အတွက်ဖြစ်လို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေအတွက် သာယာလှပတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ မလုပ်နိုင်သလို၊ လုပ်ဖို့လဲ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်တစ်ချောင်းအတွက် ငွေတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ? လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကရော ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တန်ပါသလဲ? ကမ္ဘာကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်၊ ငြိမ်ချမ်းစေချင်တဲ့စိတ်ကရော ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိပါသလဲ?ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်ကြီးကနေ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။" ခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ ဖြေစရာစကားမရှိပါဘူး။ သူတစ်ယောက်သာ အလုပ်တွေသိပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ " အချိန်မရှိဘူးကွာ။ ငါ့မှာ စစ်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲဖို့ ပြင်ဆင်ရမယ်" လို့ဖြေတယ်။ စစ်သားလေးက ရုံးခန်းထဲကနေ ထထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကိုစကားတွေ လှမ်းပြောနေတယ်။ သူပြောချင်တာက " ကျွန်တော့်အသက်နဲ့ အလောင်းအစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီစကားဝိုင်းဟာ ကျွန်တော်နဲ့တကွ ကျွန်တော့မိသားစု၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာအ၀ှမ်းရှိ လူသားအားလုံးအတွက် စွန့်စားခဲ့တာပါပဲ။ တကယ်လို့များ ခင်ဗျားတို့ အားလုံး ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို အတူတကွ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မှာ မုချပဲဗျာ"
ရင်ကွဲ လုမတတ် အော်ခေါ်နေလဲ
စကားလုံး အသွင် မကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
မျက်ဝန်းမှ ပုလဲခနေပြီ သခင်။
အခုရက်ပိုင်း အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ ပို့စ် အသစ် မတင်ဖြစ်တော့ လာလာပြီး စာဖတ်တဲ့လူတွေကို အားနာမိပါတယ်။ မနေ့ညက စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်လိုက်ရင်း စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ တွေးစရာ၊ ပြုံးစရာလေးတွေကို ခဏလောက် ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော့။ ဒီလို................
"ဘ၀ကို မကျေနပ်တဲ့လူတွေ ကံကို ပုံချတယ်။ ကံကို မကျေနပ်တဲ့လူတွေ ဘ၀ကို ပုံချတယ်။"
"ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ်နေချင်တဲ့ လူထက် သူများနေရာမှာ နေချင်တဲ့လူ အမြဲတမ်း ပိုများတယ်။"
"လုပ်မိတဲ့ အမှားတွေရဲ့ အရေအတွက်က အရည်အသွေး အဖြစ်ကို ပြောင်းလာရင် အဲ့ဒါ ဘ၀အတွေ့အကြုံပဲ။ "
"အချစ်ဟာ တယ်လီစကုပ်နဲ့ ကြည့်တယ်။ မနာလိုစိတ်က မိုက်ကရိုစကုပ်နဲ့ ကြည့်တယ်။"
"ကြင်နာမှု ဆိုတာ နားထိုင်းသူ ကြားရပြီး မျက်စိကန်းသူ မြင်နိုင်တဲ့ အရာ။"
"ကိုယ်မှားတဲ့အခါ မှားကြောင်း ၀န်ခံရင် အဲ့ဒီလူဟာ ပညာရှိ...အဲ....မှန်နေပေမယ့် မှားကြောင်းဝန်ခံနေရင်တော့ အဲ့ဒီလူဟာ မိန်းမရှိတဲ့ လူဖြစ်ရမယ်။ :)"
"အထက်လူကြီးကို သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျား စိတ်ထဲရှိတာ မှန်သမျှ ပြောရဲတယ်ဆိုရင် အလုပ်သစ်တစ်ခုကို ခင်ဗျားရှာတွေ့ထားလို့ပဲဖြစ်ရမယ်"( ခေးရော့စ်တော့ ရှာမတွေ့ပဲ ပြောနေတယ်။ အလုပ်ပြုတ်မယ့်ကိန်းမြင်ရင် အလုပ်သစ်လေးများ မစကြပါဦးနော့။ :) )
"သေတဲ့ အထိချစ်မယ်လို့ ကတိပေးထားရင် စောမသေသင့်ပါဘူး။"
"အားလုံးကို နားလည်သွားတဲ့လူ ဘာကိုမှ မယုံတော့ဘူး။"
"ချီးမွမ်းတာခံရတော့ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတယ်။ ချီးမွမ်းတာနဲ့ ညီအောင် နေရတာကိုး။"
"ရှိရှိသမျှ အခွင့်အရေးတွေထဲမှာ မှားခွင့်ဟာ လက်လှမ်းအမှီဆုံးပဲ။"
"လူရှိတယ်။ ပြသနာရှိတယ်။ လူမရှိဘူးနော်။ ပြသနာ မရှိတော့ဘူး။"
"ငွေရှိရင် ဘာမဆို လုပ်လို့ရတယ်လို့ ယူဆတဲ့လူတွေ ငွေအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ ၀န်မလေးတဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်။"
"ချစ်မိပြီဆိုရင် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ စဉ်းစားလာပြီဆိုရင် မချစ်တော့ဘူး။"
ဘလော့ရေးမိပြီဆိုရင် ဘာကိုမှ မသိတော့ဘူး။ ဘလော့လဲအရေးရပ်ရော အလုပ်တွေက ဘေးမှာတန်းစီနေရော။ ကဲကဲ အလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးရလာဒ်က အလုပ်မပြီးဘူးပေါ့နော်။ ဘလော့မရေးရ၊ မဖတ်ရဘူးဆို စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူး။ အဟတ်။ ရောဂါကတော့ တော်တော်ရင့်နေပြီနော်။ ကုစရာဆေးလဲရှိတယ်။ နည်းလမ်းလဲရှိပါတယ်။ ကိုးနတ်ရှင်ကောင်းနေသရွေ့ပေါ့။ အဟေးဟေး ( ကိုရင်ညိမ်း ရယ်သံကို ခဏယူသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ) :P
ဟုတ်ကဲ့ အခုတစ်လော ခေးရော့စ် တစ်ယောက် အပြောင်းအလဲမျိုးစုံကြားမှာ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် အလုပ်မထွက်ဖြစ်သေးပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါလဲ ခေးရော့စ်တွေးမိတယ် ပျော့ညံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်များ ဖြစ်နေသလားလို့။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အဖြေတစ်ခု ကိုယ့်ဟာကို ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တယ် " I am fightingalosing battle cos i care too much for others " ဒါက လတ်တစ်လော အခြေအနေပေါ်မှာ ခေးရော့စ် ကောက်ချက်ဆွဲချလိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်သက်သက်ပါ။ အလုပ်ကမထွက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ အင်တာနက်ဆက်ရနေဦးမယ်။ ဘလော့လဲရေးလို့ အဆင်ပြေနေမယ်။ အပျင်းထူ၊ စိတ်တွေရှုပ်ပြီး အလုပ်ရှုပ်တာလဲပါတယ် စာမရေးဖြစ်ဘူး။ အဲ့ဒါကို ကိုရန်အောင် ကြီးက ဘယ်လိုသိသွားလဲမသိဘူး။ ဟဲလို ခေးရော့စ်. ဘေးမော့လို့ ငေးနေသလား. ဆွေးနေသလား. ပို့စ်လည်း မရေးပါလား. နက်ဖြန်ထပ်လာမယ်. ဟာဒုက္ခပါပဲ။ နက်ဖြန်ထပ်လာလို့ ပိုစ့်အသစ် မတင်နိုင်ရင် ဆိုပြီး ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ကို နင်းပိတ်ကန် တွယ်တော့တာပဲ။ လက်နဲ့ပြောတာ။ ဆီပုံးကနေလာလည်တဲ့ လူတွေကလဲ သတိရတယ်တဲ့။ ကွန်မန့်လဲ ၀င်ပေးကြ။ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့။ နဂိုကမှ ပျော့ချင်နေတဲ့ စိတ် အခုတော့ လုံးဝကို ခွေကျသွားပြီ။ ကဲကဲ လေကြောမရှည်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ ဖောဝေါ့ဒ် မေးကနေ ရလာတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်။ ဖတ်ကြည့် မိုက်တယ်ဗျ...............
တစ်ခါက ကောင်လေး တစ်ယောက်က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်မိပါတယ်။ ခက်တာက ကောင်မလေး အဖေက လူကြီးတို့သဘာဝ လုံးဝကို သဘောမတူဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးဆီကို စာတစ်စောင်ပို့လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး အဖေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့။ ဘယ်လိုစာမျိုး ပို့လိုက်တယ် ဆိုတာ သိချင်ပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့ အောက်က စာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
I do not even like your face,
marry you. Our last, conversation
to give, but it is not sth that
စာလဲဖတ်ပြီးရော အဖေက သမီးကို ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက တအားပျော်သွားလေရဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေပြီဟုတ်။ အခုဒီစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့ လူတွေထင်နေတာက ကောင်လေးက ကောင်မလေးအပေါ်ရက်စက်သွားပြီပေါ့။ အဲ့လို ထင်ရင် လွဲပါတယ်။ တက်တက်စင်အောင်လွဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲသိလား။ ကောင်လေးက ဥာဏ်တအားကောင်းပ။ အခု အပေါ်ကစာကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်နော်။ ဒီတစ်ကြိမ်ဖတ်တဲ့အခါကျရင် ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းက စဖတ်။ ပြီးရင် တစ်ကြောင်းစီကျော်ဖတ်ကြည့်။ ကောင်မလေး ဘာလို့ပျော်သွားလဲ သိလာလိမ့်မယ်။ :P
ကဲကဲ အိမ်က သဘောမတူလို့ စာတွေပေးမယ်ဆိုရင် ကောင်လေးလို ဥာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး မိဘတွေကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ရအောင်။ အောင်မလေးနော်။ အဖေများ ဒီစာကို မြင်ရင် သမီးမိုက် နင်တော့လား။ ဒီလိုဥာဏ်နီ၊ ဥာဏ်နက်၊ ဥာဏ်ဝါ၊ ဥာဏ်စိမ်းတွေ အကုန်ထွက်တယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်းနေမှာ မြင်ယောင်သေး။ တိတ်တိတ်နေနော်။ ခေးရော့စ်က အချစ်ကဗျာတွေ။ အလွမ်းစာတွေ ခံစားပြီးသာ ရေးနေတာ။ ဖေဖေက သိသေးဝူး။ တိုင်ပြောနဲ့နော်။ ကျေးဇူးဆပ်မယ်။ အဟတ်
အချစ်အကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျွန်မကို တက်ထားခဲ့ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကပေါ့။ အခုတစ်ခါ ကျွန်မရဲ့ ဖိုးဖိုး နဲ့ အစ်မ ခွန်မြလှိုင် က ခေးရော့စ်ရဲ့ အချစ်ကို နားလည်ခံစားပုံကို ထပ်မံတက်လာပြန်ပါတယ်။ အရင်တစ်ခါ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မ ခံစားမိတဲ့ အချစ်အကြောင်းနဲ့ အခုချိန်ထိ ကျွန်မကို ခံစားမှုတွေ မွေးဖွားပေးတဲ့ သူ့ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အချစ်ကဗျာများကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကဗျာတွေကို ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်လို ရေးဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်လို့ အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ အရင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Love is the mystery of Beauty,
In reality, it can sometimes leave the History of your own story.
Love is so-calledaworthy Splendor,
On the other hand forces us to beaWrong doer.
When you Miss someone as usual,
Remember that Absence makes the heart grows fonder.
Love can only be Interpreted,
When you experience with your Spirit.
If Love controls over your Head,
You'll go Crazy and Mad.
Love between parents, teachers and friends are Pure
Because their Love can cure and care your Pain and Tears.
Be Alert when you are in Love,
There are times you can only meet it Half.
Channel your Jealousy in proper way,
Love will stay with you Everyday.
ဒီအပေါ်က ကဗျာလေးကတော့ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူကို စတင်မတွေ့ရှိခင်တုန်းက ကျွန်မသိရှိနားလည်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အချစ်ပေါ့...တကယ်တမ်း သူ့ကို စတင်တွေ့ရှိသွားချိန်မှာ ကျွန်မ ဒီကဗျာလေးကို ရေးမိတယ်။
When you say I'm your Miss Right;
My smile comes alive,
When I hear your sweet voice;
My life is perfect,
When I see your love is endless;
The future is not blurred,
When we love each other for sure.
လူတစ်ယောက်ဟာ ချစ်တတ်လာတာနဲ့ အမျှ အလွမ်းဆိုတာ ကိုရှောင်လွှဲလို့ မရဘူးဆိုတာ သိလာတယ်။ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အလွမ်းကို တည့်တည့်ဝင်တိုးရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက ကဗျာ တစ်ပုဒ် ထွက်ကျလာပြန်တယ်။ အလွမ်းဗိုင်းရပ်စ်တဲ့..............
Anti virus ကောက်တင်လိုက်တယ်
System က Alert လာပြနေတယ်
........ဒီလိုနဲ့ပဲ ခေးရော့စ် တစ်ယောက် အချစ်နဲ့ သူ့ ကို တစ်သားတည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာ...........
When I know your love
I feel as if we've come to possessalittle part of each other,
Though we are far from one another.
Whenever I'm caught on the horns of dilemma,
You help me out and lead me with your kind behavior.
At times, I feel blue, sad, hopeless and helpless,
And I can always withstand cos of your love and kindness.
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အချစ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပဲပြောပြော အချစ်ဟာ အဓိက မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပြော၊ ကျွန်မအတွက်တော့ အချစ်ဟာ................................................................
အရာရာကို အာခံလို့ ခေးရော့စ်တစ်ယောက် သိပ်ချစ်တာ အပြစ်လားဆိုပြီး ကဗျာတွေလဲ ရေးနေတတ်ပြန်ရော။
အခုလောက်ဆို ခေးရော့စ်ရဲ့ အချစ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် နဲ့ ခေးရော့စ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို သိနေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ရေးပြီးသား ကဗျာတွေ ပြန်တင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်စီတိုင်းဟာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက် ၀ိညာဉ်တွေ ကွန့်မြူးနေတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အော် တစ်ဆက်တည်း ဆက်ပြောရဦးမယ်။ အခုတစ်လော ကျွန်မ ရဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကနေ ထွက်ဖို့ အထိရည်စူးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်နောင် ပို့စ်အတင်ကျဲခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မလေးစားရတဲ့ ဘလော့ဂါ အစ်ကို၊ အစ်မတွေရဲ့စာတွေကို မဖတ်နိုင်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခေးရော့စ်ဆိုတာ မသိလိုက် မသိဘာသာလေး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ ကျွန်မချစ်တဲ့ ဘလော့လေးနားမှာ လူကိုယ်တိုင် မရောက်နိုင်တောင် စိတ်ကတော့ အမြဲရောက်နေမှာပါ။ လူဆိုတာမကောင်းဘူးနော်။ အခုလိုမျိုးတွေးရေးပြီး နှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ ၀မ်းနည်းတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အခြေအနေတွေအရ တွေ့ဆုံကြတယ်။ အခြေအနေမပေးလို့ ခွဲခွာသွားရမယ်ဆိုရင်လည်း အမှတ်ရစရာလေးတွေကတော့ အမြဲ ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိနေမှာပါ။
"ဘ၀ အောင်မြင်မှုအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူကြပါစို့" ဆိုတဲ့ အဖွင့်စာသားလေး ဘလော့ဂါ ကိုရန်အောင် တည်ထောင်ထားပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘလော့လေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် အဲ့ဒီဘလော့လေးဟာ တစ်ခြားသော ဘလော့ဂါ အစ်ကို၊ အစ်မတွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ ရပ်တည်လာတာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ ပါဝင်ရေးသားတဲ့သူ အများစုကတော့ ကိုယ်တတ်ထားသမျှ၊ ကိုယ်သိသမျှကို ဝေမျှထားကြပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို အင်္ဂလိပ်စာကို အစကနေလေ့လာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက် ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်းလေးတွေကို ခုံမင်လုိ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘန်းစကားတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဘလော့လေးမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ စကားပုံလေးတွေကို ဘေးမှာထည့်သွင်းထားပေးတယ်။ နေ့စဉ်ပေါ့။ စာအသစ်မဖတ်ဖြစ်တောင် စကားပုံလေးတစ်ခုခုကို ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ စာဖတ်သူအတွက် အနည်းအကျဉ်း အသုံတည့်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ပါဝင်ရေးသားသူအားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ်သိကိုယ်တတ်တာကို ထုတ်ပြမော်ကြွားခြင်း ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ တတ်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီရာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးနေခြင်းပါ။ အချိန်လဲရှိတယ်၊ ကိုယ်တတ်ထားသလောက်ကိုလဲ လူများကို ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင် အီးမေးကနေတစ်ဆင့် ကိုရန်အောင်ဆီမှာ contributor ယူလို့ရပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အကျိုးတစ်ခုအတွက် ကျွန်မတို့ အားလုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ တစ်ဒေါင့်ကနေ ပါဝင်ကူညီရင်း အင်္ဂလိပ်စာ ဘလော့လေးကို အသက်သွင်းလိုက်ရအောင်။
စိတ်ဝင်စားသူအားလုံး ဒီ လင့်လေးကို နှိပ်ပြီး သွားရောက်ဖတ်ရှု၊ ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
ရန်ဆောင်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ ဆင်းရဲငတ်မွတ်မှုတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု နဲ့ အမျိုးမျိုး သောရာဇ၀တ်မှုတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ 21ရာစုရဲ့ အဖွင့်စာမျက်နှာက အစပြုလို့ ယခုချိန်ထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်ချို့သော လူများဖျားနာလို့….တစ်ချို့တွေ သေဆုံးလို့……..တစ်ချို့ကွာရှင်းပြတ်စဲကြလို့…..တစ်ချို့တစ်ချို့တွေ ရောဂါဆိုးရဲ့ နှိပ်စက်မှုနဲ့ မနက်ဖြန်သေမလား သဘက်ခါသေမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သိမ်ငယ်နေရတယ်။ ဆန္ဒတွေ ဆွဲခေါ်ရာနောက် တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ပါလို့ တကယ်လို့များ ငါသာ ဒီထက်ဒီပိုချမ်းသာခဲ့ရင်…..တကယ်လို့များ……ငါသာ အတိုင်းထက်အလွန် ကျော်ကြားမှုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရင်….တကယ်လို့များ ငါသာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ အသက်အရွယ်ထက်ပိုငယ်သွားရင် (သို့) ပိုသာကြီးခွင့်ရခဲ့ရင်….တကယ်လို့များ ဘ၀အာမခံချက်ပိုပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်ကောင်းတစ်ခုကို ဖက်တွယ်နိုင်ခဲ့ရင်…..တကယ်လို့များ ငါဟာ မတူညီတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုအသစ်အဆန်းကို တွေ့ကြုံနိုင်ခဲ့ရင်…..ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘေးနားမှာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ရပ်နေရှာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မြင်အောင်မကြည့်လိုက်နိုင်တော့ဘူး။ တကယ်လို့ အငြင်းပွားနေကြပြီ… တစ်ယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်၊ ပြောပြချက်ကို နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်အောင် ဖြစ်နေပြီ။ နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ ညှိနှိုင်းမရတဲ့ ပြသနာ တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် သွေးပူနေတုန်း ခဏမှာ ဆက်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ပြသနာ သေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီးထိ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်နေရက်နဲ့ မုန်းသွားသည်အထိတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးပူနေတုန်း ဒေါသတွေ သိပ်ကြီးနေတုန်း မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့။ အမှားတွေ့နိုင်တယ်။ ကိုယ်တွေ့နော်ကိုယ်တွေ့.........။ တကယ်လို့များ တစ်ဘက်ကလူကသာ ကိုယ့်ကို ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကလဲတောင်းပန်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့ နေ၀င်ချိန်ကိုရောက်လာပြီလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြသနာတွေခဏမေ့လိုက်ပြီး တစ်ညလောက်အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့။ နောက်နေ့သစ်တစ်ခုမှာ နိုးထလာတဲ့အချိန်ကျတော့ ဒီနေ့ပြသနာက မနေ့ကထင်သလောက် ကိုယ့်အတွက် မခက်ခဲနေတော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖြေတစ်ခုတော့ ကိုယ့်မှာရှိသွားပြီလေ။ ဘယ်ရှုထောင့်ကနေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မယ်။ မှားနေရင် တောင်းပန်မယ်။ မကောင်းနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကို ပြင်နိုင်အောင်၊ ပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း နောက်နေ့ရက်တွေအတွက် ဆက်လက် ခရီးထွက်ရဦးမှာပဲ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ချို့ကို စာရင်းပြုစုရင်း ဘ၀မှာ သူတို့ဟာ ငါချစ်တဲ့သူတွေပါလား။ ငါနဲ့လူချင်းဝေးနေရင်တောင်မှ ငါရဲ့အနားမှာရှိနေပေးတဲ့ အားပေးဖော်တွေပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးရလာနိုင်တယ်။ ဒါက စာရင်းပြုစုမှရလာမယ်ဆိုလို့ စာရင်းထဲမှာချရေးရမယ်လို့ ကျွန်မတော့ တစ်သမတ်မထင်မိဘူး။ တကယ်တော့ နှလုံးသားထက်မှာ ကမ္ဗည်းထိုးထားပြီးသားလေ။ ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့လူတွေဆိုတာ နှလုံးသားက ခံစားပြီး ကျောက်ထက်အက္ခရာ တင်ထားပြီးသားပါ။ အခုဆို ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ ဘလော့လေးက ကျွန်မသံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ လူတွေ၊ ကျွန်မကို ချစ်ခင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မရေးတဲ့စာတွေကို အားပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မလေးစားတဲ့ စာရေးဆရာတွေကို အားကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်..ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကျွန်မချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ အသွားအလာလုပ်ခွင့်ရတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်မရဲ့အတူရှိနေတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ အခုဆို ဘလော့ရေးလာတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ဒီအတောအတွင်းမှာ ကျွန်မ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘလော့စာမျက်နှာတွေရဲ့ နေ့တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိသလို၊ စိတ်ညစ် စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့နေ့တွေလဲ အများကြီးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလေးတစ်ကြောင်း ကွန်မန့်လေး တစ်ခုနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မမြင်၊မတွေ့ဘူးသည့်တိုင် စာဖတ်ရင်း ရင်းနှီးလို့ အားပေးမှုတွေလဲ အများကြီးရခဲ့တယ်။ နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ ဖေးမပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေကလဲ ကျွန်မအတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေါ့။ တစ်ခါတစ်ခါ ဘ၀အမောတွေ သိပ်ကိုများပြားလာတဲ့ အခါမှာ အကောင်းမြင်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မုန်းတီးလာတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ အကောင်းမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမိတဲ့ စိတ်ကမှသာ လူကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေတယ်။ ဖြစ်သမျှကို ခံစားနေရင် ကြာလာရင် ခံရပါများတဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးလဲ မွန်းကျပ်လာတယ်။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကို ကြည့်လို့ လောကကြီးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေနေရတယ်။ အပြောလွယ်ပြီး လေ့ကျင့်ယူရခက်တဲ့ တစ်ချို့ချို့သော စကားလုံးတွေကို လေ့လာသင်ယူရင်း ပျော်သလိုနေ၊ ပျော်အောင်ကြိုးစားရင်း ခေးရော့စ် တစ်ယောက် လူ့ဘ၀ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးခတ်နေဆဲ........................
အချစ်....အချစ်....လူတွေ ပါးစပ်ဖျားက အချစ်တစ်ခုဟာ သူတို့ခံစားချက်နဲ့လိုက်ပြီး ခံယူချက် ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု တွေ့နေချိန်မှာ အချစ်ဟာ နတ်ဘုရားမလေးပေါ့။ တကယ်လို့များ အချစ်တစ်ခုကို အတ္တနဲ့လွန်ဆွဲလို့ ချစ်မိကြမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချစ်ဟာ အကျည်းတန် သွားနိုင်တာလေးကို စိတ်ကူး ပုံဖော်ကြည့်တာပါ။
အချစ်ကို အရှုံးပေးမိလို့ နှလုံးအေးတာလား
အနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ သတ္တိမရှိလို့လား?
ကျွန်မရဲ့ ညီမငယ်လေး တစ်ယောက် ဘလော့စရေးနေပြီလေ။
သူဘလော့ လောကထဲကို ခြေချဖို့ အားယူနေချိန်မှာ အစ်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မမှာ အားပေးကူညီရမယ့် တာဝန်အပြည့်ရှိတာပေါ့နော့။ ကျွန်မရဲ့ ညီမလေးလိုလဲချစ်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုလဲ ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေး ဘလော့စရေးပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာတာပေါ့။ ကျွန်မဘလော့ကို လာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများ နဲ့ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ ညီမလေး၊ မောင်လေး အားလုံးလဲ အချိန်ရခဲ့ရင် ကျွန်မညီမလေးဆီကို သွားပြီး အားပေးကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သြော်မေ့လို့....သူ့လင့်လေးကိုမပေးရသေးဘူး။
ညမှာ ကောင်းစွာ အိပ်စက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ မနက်နိုးလာတာနဲ့ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းနေတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အိပ်စက်မှုကိုသာ ရရှိမယ်ဆိုရင် လူက လန်းဆန်းနေတယ်။ နောက်နေ့သစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အားအင် ပြည့်ဝနေတယ်။ စိတ်ကလဲ ကြည်လင်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် နေ့တစ်နေ့ရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ ခွန်အားတွေ ပိုရှိနေသလိုပါပဲ။ ပိုကျန်းမာနေမယ် ………. ပိုပြီးတော့တောင် ကြည့်ကောင်းနေသေး။
အကောင်းဆုံး အိပ်စက်ခြင်းကတော့ တစ်ညလုံး ဆက်တိုက် ဘာအနှောင့်အယှက်မှ မရှိဘဲ အိပ်စက်နိုင်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အိပ်ချိန်က ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အောက်ပါ တာဝန်ရပ်များကို ပြီးမြောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင် တော့ပါ။
ဦးနှောက်မှ မှတ်ဉာဏ်အဖြစ် သိုလှောင်ပေးခြင်း။
ကြီးထွားရန်နှင့် အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဟော်မုန်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း။
နောက်ဆုံး ရလာဒ်ကတော့ ကောင်းစွာ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့လျှင် ကျောင်းစာများကို ကောင်းစွာ မလေ့လာနိုင်ခြင်းနှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ ပြောပြချက်အရ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကိုအိပ်ချိန် ၇နာရီ ကနေ ၉နာရီကြားရှိရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သောသူတွေက အိပ်ချိန်နည်းပေမယ့် တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး တစ်ချို့လူတွေက အိပ်ချိန်ပိုရရှိမှသာ တစ်နေ့တာ လည်ပတ်ဖို့ အားအင်ပြည့်ဝကြပါတယ်။
The National Sleep Foundation (NSF) ရဲ့မှတ်တမ်းများအရ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ချိန်က သူ့အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားအလိုက် ကွဲပြားသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးများ ကတော့ အိပ်ချိန်တော်တော်များများ လိုအပ်တယ်။ ဒါတင်မကဘူး….၂၄နာရီပတ်လုံးမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ခဏခဏ သိပ်ပေးတာ ကလေးလေးတွေအတွက် ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။ အသက် (၅)နှစ် အရွယ်လောက်ထိကို အခုလိုမျိုး နေ့ခင်းဘက် တစ်ရေးတစ်မော အိပ်စက်ခိုင်းခြင်းက ကလေးများအတွက် များစွာသင့်လျော်ပါတယ်။ အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ မှေးစက်ဖို့ လိုအပ်ချိန်တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကွာဟလာပါတယ်။
အိပ်ချိန် လုံလောက်စွာမရရှိခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။
အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ စတဲ့ အာရုံခံစားမှုအပိုင်းနဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု အပိုင်းတွေမှာ နှေးကွေးမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ချိန်ကို လုံလောက်စွာ ရရှိနေမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်မှ leptin နဲ့ ghrelin လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဓါတ်တွေကို ပုံမှန်လည်ပတ်နေစေတယ်။ ဒီဟော်မုန်းနှစ်မျိုးက ဇီဝအစာချေဖျက်စနစ်အတွက် အထောက်အကူ ပြုသလိုပဲ ကျွန်မတို့ တစ်နေ့တာမှာ စားသုံးလိုက်တဲ့ ကယ်လိုရီဓါတ်တွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အကူအညီပေးပါတယ်။ အိပ်ရေး မ၀တဲ့ အချိန်မှာ ၄င်း ဟော်မုန်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို အလွယ်တကူ မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ပေါင်ချိန်တက်လာခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ လုံလောက်စွာ အိပ်စက်နိုင်ခြင်းက လူတိုင်း အတွက် လိုအပ်သလို၊ အရေးလဲ ကြီးပါတယ်။ နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆိုသလို လုံလောက်စွာ မအိပ်စက်နိုင်သူများအတွက် ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအပိုင်းမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ စားသောက်ခြင်းနဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်း အကြောင်းကိုသာ ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး ရေးနေတာ။ တကယ်တော့ ကျွန်မအတွက် တစ်နေ့တာ အိပ်ချိန်တွေကို လုံလောက်စွာ မရရှိပါဘူး။ ညညတွေဆို အိပ်မပျော်တတ်ဘူး။ လူများတွေက ပြောတယ်။ အိပ်မပျော်ရင် စာဖတ်လိုက်။ စာဖတ်ရင်းနဲ့ ငိုက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားရောတဲ့။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ အဲ့ဒီ method က အသုံးမ၀င်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အိပ်မပျော်လို့ စာအုပ်တစ်အုပ် ကောက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အိပ်ချင်စိတ်တွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပါလေရော။ ဒါနဲ့ပဲ ဘလော့မှာ ကဗျာတွေလည်း ကျဲလာရော။ မဆိုင်ဘူးလားဆို ဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူး။ နဲနဲလေးတော့ဆိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆို ကဗျာဆိုတာ ရေးချင်းတိုင်း ရေးလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မအတွက် ပြောတာပါ။ အထူးသဖြင့် ညမိုးချုပ်ချိန်တွေဆို တွေးငေးပြီး ကဗျာထိုင်စပ်ရတာကို ၀ါသနာ အလွန်ပါပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အိပ်ပျက်ညပေါင်းလဲ မနည်းတော့ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ညကို စောစောအိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာတွေ ခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာလဲ ဇွတ်ကြိတ်မှိတ်ပြီးကို အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ညဘက်တွေ အိပ်ဆေး သောက်အိပ်မှ အိပ်ပျော်တယ်။ ညရောက်မှာကို ကြောက်တတ်လာတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေကို အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်ချင်နေပြီ။ အခုတော့ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်လို့ အိပ်ပျော်စ ပြုလာပါပြီ။ ဒီ topic လေးကလဲ ကျွန်မလို အိပ်မပျော်တဲ့ လူတွေအတွက်များ အသုံးဝင်မလားဆိုပြီး ဘာသာပြန်တင်လိုက်တာပါ။ တစ်ချို့ကပြောတယ် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်လိုက်လေတဲ့။ အဲ့လောက်တောင် လွယ်ကူနေမှတော့ အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါဆိုတာတောင် ရှိလာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အအိပ်ကောင်းသူများ၊ အိပ်ပျော်လွယ်သူများ အားလုံးကို မနာလိုဘူး။ :(
သေခါနီး ဆယ်ရက်အလို chaos ၏ ကယောင်ကတမ်း ဖွင့်ဟချက်များ
ရှာရှာ ကြံကြံလဲ တက်တတ်ပါတယ်။ မသေခင် ဆယ်ရက်အလိုတဲ့။ ကဲ….ယိမ်းနွဲ့ပါး က ကိုမိုးကြယ်ရေ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း လက်ကသွားတဲ့ အတိုင်းရေးလိုက်ပြီနော်။ အင်း……။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်မက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက "ချူချာမယ်" (ပန်းကန်ပြားမယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော် အဟတ်) ဆိုတဲ့ ဘွဲ့နာမည်ကို မလိုချင်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ။ ခုချိန်ထိပေါ့။ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ရောဂါတွေ အလျှိုလျှိုနဲ့ ဘယ်ကနေမှန်းမသိဘဲ ၀င်ဝင်လာတတ်လွန်းလို့ လူများတကာရဲ့ "အဲ့လောက်တောင်ပဲ ပျော့ရလား? အားအားရှိဖျားနေတယ်နော်? ဒီလိုမျိုးသာဆို အသက်ကြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? နင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်?" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ အောက်မှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ ပြန်ဖြေစရာ စကားမရှိခဲ့ပါဘူး။ မောင်နှစ်မသားချင်း အရင်းအချာဆိုတာ တစ်ယောက်တစ်လေမှ မရှိတဲ့ ကျွန်မ၊ မိဘတွေရဲ့ ပုံအောပြီး ချစ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်လို့ စိတ်ပျက်စရာ နေ့ရက်တွေကို အားတင်းပြီး ကျော်လွှားနေရတယ်။ သေမင်းဆိုတာ မျက်နှာမလိုက်တတ်ဆုံးသော၊ ဘာနဲ့မှ လာဘ်ပေးလို့ မလွှတ်မြောက်နိုင်သော အမှန်တရားရဲ့ ခါးသီးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပေါ့။ တကယ်လို့များ သေမင်းက မဆိုင်းမတွ လက်မရွံ့ဘဲ တစ်ချောင်းတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ အသက်ကို နှုတ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ဆယ်ရက်ပဲကျန်တော့မယ့် အချိန်ကို ရောဂါဆိုးဆိုးရွားရွား တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို အိပ်ရာထက်မှာ ခံစားပြီး မကုန်လွန်ချင်ဘူး။ ကိုယ့်အနီးနားက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ လူတွေ မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ဝေဒနာခံစားနေရတာကို မမြင်စေချင်ဘူး။ မမြင်ခိုင်းရက်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မခွဲနိုင်ဘူး။ မခွဲရက်ဘူးလေ။
ဘယ်ချိန်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မမေးနဲ့
နေ့သစ်ကို ကူးပြောင်းဖို့ အားယူနေတယ်။
ပထမဆုံး သတိရမိတာက ဘုရားသခင်ကိုပေါ့။
ငါ…ဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့ တရားရိပ်မှာ အေးချမ်းမှုကိုရှာရမယ်။
သံယောဇဉ် အပူမီးတွေနဲ့ လောင်မြှိုက်နေလို့ အသိဥာဏ်တွေ ချိနဲ့ကုန်တာ။
ဘာလို့ ဒီအချိန်မှာမှ ဒီဝေါဟာရကြီးက ငါ့အတွက် ခါးသီးနေတာလဲ။
မပြောနဲ့ အဲ့ဒီ သေစကားတွေ။
ဟား…….နောက်ဆုံးချိန်ထိ ငါ တရားမရသေးဘူးပဲ။
ငါ မလိုချင်တဲ့ အချိန်တစ်ခု
ငါ့ရုပ်ကလာပ် ရှေ့မှာ လှဲလျောင်းနေပါလား…
မသေခင်ဆယ်ရက်ကို ကဗျာနဲ့ရေးလိုက်တာ။ အဟတ်။ တကယ်ပဲ သေသွားသလိုခံစားရတယ်။ ဆယ်ရက်မှာ လူများတွေလို ဘာလုပ်မယ်။ ဘယ်သွားမယ်။ ဘာစားမယ်နဲ့ ကျွန်မ အချိန်တွေမကုန်ပဲနဲ့ အတွေးတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရင်းပဲ သေသွားမယ်ထင်တယ်။ အင်း….ဒီခေါင်းစဉ်လေး ရေးရတာ အကျိုး အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆယ်ရက် မပြောနဲ့ နက်ဖြန်ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာတောင် ကြိုသိခွင့်မှမရှိတာပဲ။ ဒီနေ့ လတ်တစ်လော တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချမယ်လေ။ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းမှုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အာခံရင်းနဲ့ လုပ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်မယ့် အရာတွေကို သေမင်းဆိုတဲ့ ကိုရုပ်ဆိုး မလာခင် စုတ်တံတစ်ချောင်းနဲ့ လှပတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ခြယ်မှုန်းထားမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက ---------- မိဘနှစ်ပါး၊ ကျွန်မ၏ အဒေါ်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ " သူ "
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက ---------- ကျွန်မရဲ့ "သူ"
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း ---------- Whether you do right or wrong there may be at least one person to put the blame on you. It's good to do your best regardless of people's criticism.
Is it your habit or manner to invade people's privacy?
Do you think I amaFOOL.
Don't abuse my intelligence!!
Don't insult my character!!
Don't think that I will give you up!!
Don't try the patience ofaSaint!!
It's all ENOUGH!
I can't stand the sight of you anymore
Nor can I believe the tricks and lies of you
I've totally lost the patience of the job
YOU.......suchareal INTRUDER!!!
Even if you don't have the impact on some of my thoughts ...
How are you going to dominate my life.
I, Myself is going to programme my future
Your smile makes me feel shy,
Your love makes me blind,
Your eyes shine when I say you are mine;
But.....................be careful of Lady Luck
She can destroy our love....
ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ ဘွားတော်က တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှန်းမသိတဲ့ လက်နက်ပုန်းတွေ ထုတ်ထုတ်သုံးတယ်ဗျာ။
မထင်မှတ်ထားတာဆို သူက သိပ်လုပ်ပြတတ်ချင်တာ။ ပြောကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောတော့ပြောလိုက်ပီ
၁၃ရက်နေ့တိုင်းဟာ ကျွန်မအတွက် အမှတ်တရ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပေါ။
တကယ်လို့များ မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက်အတွက် တူညီတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုနဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို မတူညီတဲ့နေရာ နှစ်ခုကနေ တိတ်ဆိတ်စွာ အမှတ်တရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်..........
နေသာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့မှာပေါ..........ပင်လယ်ကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်လျှောက်မှာ မထင်မှတ်ပဲ အံ့သြစရာတစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်။ ၁၄နှစ်၊ ၁၅နှစ်အရွယ် ကောင်လေးအုပ်စု သုံးစုလောက်တွေ့မိကြတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်လေးတွေပေါ့။ သူတို့အားလုံး အပြေးပြိုင်ဖို့ အတွက် တာဆူနေကြတယ်။ ပထမ အုပ်စုက တစ်အားတက်ကြွနေတယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အနိုင်ရချင်တဲ့၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေကြတယ်။ ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ ကောင်လေးစုစုပေါင်း အယောက် (၂၀) လောက်ရှိမယ်။ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ ပထမအုပ်စုလောက် တက်တက်ကြွကြွ မရှိကြဘူး။ ပထမအုပ်စုကို တကယ် ယှဉ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးတောင်ဝင်နေပုံရတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ ကောင်လေးတွေက (၁၀) ယောက် မပြည့်တစ်ပြည့်ပဲ။ သူတို့ကတော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချထားလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယှဉ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အရှုံးစိတ်ကို နှလုံးသွင်းထားနေလေရဲ့။ အဖွဲ့တွေအားလုံး အပြေးပြိုင်ပွဲအတွက် အာရုံထားနေကြချိန်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်နေတယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အားကောင်းမောင်းသန် ကောင်လေးကတော့ အသက်တောင် ပြင်းပြင်းမရှူဘူး။ တစ်ခြားအဖွဲ့တွေရဲ့ ဟိုးးးးးးအနောက်ဘက်မှာ အများကြီး ပြတ်ကျန်နေခဲ့ပေမယ့် အပြုံးမပျက်၊ ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေလိုက်တာ။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ရှုခင်းတွေကို ငေးမောရင်းပေါ့.......... သူ့အတွက်ကတော့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ မှတ်ယူထားပုံ မပေါ်ဘူး။ နေသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ အလှအပ ခံစားရင်း လမ်းလျှောက်ထွက်လာပုံပဲ။ တစ်ခြားသူတွေလို စည်းကမ်းကလနားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ အနိုင်ရလိုခြင်း ဆိုတာထက် သူ့ပုံစံက ပါဝင်မှုတော့ရှိတယ်... ဒါပေမယ့် ရိုးရှင်းတယ်... မရှုပ်ထွေးဘူး... တကယ့်ကို ရိုးရိုးလေး... လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လူများတွေ သူ့ကို ဘယ်လိုထင်မယ်၊ ဘယ်လိုတွေးမယ် ဆိုတာကို လုံးဝ အမှုမထားဘူး။
ဒါကတော့ ကျွန်မဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဆောင်ပါးလေးတစ်ပုဒ်ကို သင့်လျော်အောင် ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ထားတာပါ။
ဒီရှုပ်ထွေး ပွေလီလှတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ရင်း၊ ရုန်းကန်ရင်း၊ ဘ၀ခရီးကို လေးပင်စွာ လျှောက်လှမ်းနေမိကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာကို မြေမြှုပ်သဂြိုလ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် တကယ်ရော ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု အများကိုလဲ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် စိတ်ကို ထွက်ပေါက်ပေးသင့်တယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ စိတ်ကို ထောင်သွင်း အကျဉ်းချပြီး ပိတ်လှောင်ထားမယ့်အစား ပေါ့ပါးလွတ်လွပ်တဲ့ ခံစားမှုလေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိလိုက်ကြဘူး။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲလေးဖြစ်သွားတာပါ။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်နေရတဲ့ ဒီလောကဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခုထဲမှာ ယုံကြည်မှုကို မလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်ရင်း စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုလဲ မေ့ထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲနော့.....
YoU <= HaPpiNeSs <=LoVe
When the tears run down my cheeks,
I know one thing that I love u indeed.
When I know u love me too deep,
The only thing I can hold is belief.
When u say u can't leave me,
I too have the same feeling not to part from u.
When u say that I'm ur precious thing,
At the same time I too feel that it's my wish & dream.
People will say that never say never,
But I will always murmur that I will love you forever & ever.
မှတ်ချက်။ ခေးရော့စ် အကြိတ်အနယ် ခံစားတင်ပြသည်။ :P
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://chaos.myanmarbloggers.org/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.